भंगेरा चरो किन यति धेरै कामुक बनेको होला ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
भंगेरा चरो किन यति धेरै कामुक बनेको होला ?
भङ्गेरा कामुक चरा ! महान नाटककार सेक्सपियरले भङ्गेरालाई यौन कार्यसँग जोडेका छन् । भङ्गेरा त्यस्तो प्राणी हो जसले दैनिक तीन सय पटकभन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्छ । मान्छेको वस्तीसँगै रहने चञ्चले सानो चरा भङ्गेरामा आखिर त्यस्तो के शक्ति छ ? वैज्ञानिकहरुले यसबारे अनुसन्धान नगरेका होइनन् । यौनउत्तेजना बढाउन भङ्गेरा खाने चलन अझै छ ।
भङ्गेरा खाँदा यौन उत्तेजना बढ्ने सोच राख्नेहरु परापूर्व काल देखि नै थिए । जडिबुटिका ज्ञाता निकोलस कुलपिपरले भङ्गेराको गिदीले यौन उत्तेजना बढाउने उल्लेख गरेका छन् । उनको तर्कलाई आधार मान्दा भङ्गेराको टाउको खानाले यौन उत्तेजना बढाउँछ । विगत देखि नै यौन उत्तेजना बढाउन भङ्गेराको टाउको खानेहरु थिए ।
के हो भङ्गेरा ?
भङ्गेरामा अद्भूत यौन शक्ति हुन्छ । पोथी भङ्गेराले प्रजननका समयमा भालेमाथि प्रभुत्व जमाउने गर्छे । सन् २००० मा जोडी एम. जओरले अक्सफोर्ड जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखमा पोथीले भालेमाथि प्रजजनका बखत जमाउने प्रभुत्वबारे उल्लेख छ ।
तापक्रम र मौसमले पनि भङ्गेराको यौन सम्पर्कको संख्यामा फरक पर्दछ । सबैभन्दा बढी सम्पर्क प्रजननको समयमा हुनेगर्छ । सरदर दैनिक तीन सय पटक भन्दा बढी यौन सम्पर्क भने गरेकै हुन्छ ।
भङ्गेरामा यौन स्वच्छन्दता हुन्छ । एक अर्काको जोडीसँग दैनिक सयौं पटक यौन सम्पर्क गर्छन् । पोथी भङ्गेराले एक वर्षमा दुई देखि तीनपटक सम्म अण्डा पारेर बच्चा कोरल्ने गर्छे ।
भारतमाथि किन खनिए देउवा ?
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले तराईका जिल्लामा बर्षेनी हुने डुबान समस्याको कुटनीतिक समाधान खोज्नु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै देउवाले सरकारलाई तराईका जिल्लामा बर्षेनी हुने डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले तटबन्धका कारण बर्षेनी डुबानको समस्या झेल्नुपरेको भन्दै भारत र नेपालले एक आपसमा दोषारोपण गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन नसक्ने उल्लेख गरे। ‘भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। भारतले नेपाललाई दोष दिने नेपालले भारतलाई दोष दिने कति दिन सम्म चल्छ?,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कुटनीतिक तहबाट भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने भएको छ।
भारतले डुबान पार्यो भन्छन् । भारतले नेपालले सिध्यायो भन्छ। त्यसकारले यसमा कुटनीतिक ढंगले कुरा गर्नुपर्छ।’ कोशी ब्यारेज बन्दै गर्दाको समयमा नेपालको सिमामा स–साना चिया पसल गरी बसेकालाई भारतले सुरक्षाको कारण हटाउन खोजेको भन्दै उनले सो समस्या समाधानका लागि पनि सरकारलाई आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारले बाढी र डुबानमा परी घरवार विहीन भएकालाई उचित वासस्थान र तात्कालीन राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप लगाए।
सामान्य सुब्बाबाट जागिर सुरु गरेका कार्की कसरी भए मालामाल ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको सदावहार प्रशासन प्रमुख एवं बद्नाम कर्मचारी ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि मन्त्रालयमा काम गर्नेगरी तानेको छ । मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ गतेको मितिमा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्बोधन गरेर कार्कीलाई मन्त्रालय हाजिर गराउन भन्दै पत्राचार गरेको हो ।
महानगरपालिकामा ‘चैते बहुदलीय’ कर्मचारीका रुपमा चिनिएका कार्कीले महानगरको ठेक्कापट्टा, पार्किङ्ग, होडिङ्ग बोर्ड राख्न दिने र खरिदमा सेटिङ्ग मिलाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कर्मचारी मध्येमा पर्दछन् भन्ने आरोप पनि खेप्दै आएका छन् । कार्की्विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मुद्दा परेको बताइन्छ ।
पञ्चायती राजमा पशुपति शम्शेर राणाको आशीर्वादबाट महानगरपालिकाका जागिर जीवन शुरु गरेका कार्की जसको सरकार आयो उसैको भक्त बन्न सक्ने खुवी भएका व्यक्तिमा गनिन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेर प्रशासन विभागमै बसेर करोडौं आर्जन गर्न सफल भएको उजुरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परेपछि कारवाही स्वरुप कार्कीलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय भएको स्रोत बताउछ ।
हुन त ज्ञानेन्द्र कार्की यस्ता कर्मचारी हुन् जो एमाले, माओवादी, कांग्रेसदेखि राजावादीसम्मका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहेका छन् । आफू पनि कमाउने र माथिल्लो निकायका हाकिमहरु कहाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको रकमको हिस्सा पु¥याएर महानगरको शक्तिशाली विभाग प्रशासनमा नै बसिरहन सक्ने व्यक्तिमा कार्की पर्दछ ।
कार्की भन्दा अगाडि महानगरपालिकामा सदाबहार प्रमुख भएर गएका शान्ताराम पोख्रेल अवकाश भएसंग महानगरमा कार्कीको रगजगी चल्दै आएको थियो । आफ्नो अधिकार कटौती गरिदिएकै कारण उनले तात्कालीन कार्यकारी प्रमुख यादव कोइरालाविरुद्ध विषवमन पनि गरेका थिए । त्यत्तिमात्र होइन मन्त्रालयका केही कमिशनखोरहरुसंगको मिलेमतोमा उनले महानगरपालिकामा निजामती सहसचिव नपठाउ लविङ्ग मात्र गरेनन् सहसचिव नपठाउँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने करोडौंका फाइल, बिलहरु सदर गरेबाट उठेको रकम बुझाउने शर्तहरु समेत राखेको श्रोत बताउछ ।
केही दिन अघि मात्र घुस लिँदालिँदै काठमाडौं महानगरको सामाजिक विकास विभागबाट रङ्गेहात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका कृष्ण सोतीले लिएको १ लाख ७ हजार मध्ये ७० हजार त ज्ञानेन्द्र कै भागको रकम हो भन्ने चर्चा पनि महानगरमा ब्यापक हुने गरेको छ । त्यत्तिमात्र होइन महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुमा सेटिङ्ग मिलाउनका लागि आफ्ना हनुमान बनाउन खप्पिस ज्ञानेन्द्रले आफू निकट चाकडीबाजहरुलाई विदेश लैजाने काम पनि गर्दै आईरहेका थिए ।
खुल्ला मञ्च विक्री गरेर टहरा बनाउन स्वीकृति दिने प्रमुख नाईके ज्ञानेन्द्र कार्कीले उनका हनुमान हरि कुँवरलाई लिएर टहराबाट आएको कमिशनको रकमले त्यस बेला बेलायत शयर गर्न गएको स्रोतको दावी छ । कार्कीको फेर समाएर उनकै मतियार बनिरहेका युवराज खनाल अहिले ज्ञानेन्द्रलाई मन्त्रालयमा हाजिर नगराउन भन्दै केही पूर्व एमालेका नेताहरुलाई हारगुहार गर्न दौडधुप गरिरहेको खबर छ । महानगरभित्र पूर्व एमाले निकट कर्मचारी संगठनभित्र बसेर काम गरिरहेका खनाल पनि कार्कीस“ग टहराको कमिशनमा त्यसबेला बेलायत घुम्न मौका पाएको स्रोत बताउछ ।
कार्कीलाई मन्त्रालय काजमा तान्ने पत्र महानगरमा पुगेपछि महानगरमा हल्लीखल्ली नै चलेको बताइन्छ । कार्कीको एसम्यानका रुपमा चर्चित अर्का कर्मचारी हरिकु“वरले त कार्की मन्त्रालय हाजिर गराए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको इमानदार कर्मचारी स्रोत बताउछ । महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा बसेर सम्पत्ति कमाएका हरि कुँवर र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंं ६ मा सचिवका रुपमा रहँदा नक्कली नागरिकता काण्डमा मुछिएका युवराज खनाल अहिले ज्ञानेन्द्रलाई प्रशासन विभागमा नै थमौती गर्ने अभियानमा जुटेको कर्मचारी स्रोत बताउछ ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको रु. ५ करोड काण्डदेखि खुल्लामञ्च टहरा काण्डसम्म नाम जोडिएका कार्की्विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष उजुरी परेपछि उनीमाथि कारवाही सुरु भएको हो । कार्कीकै कारण मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पदभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म पनि उनी विवादबाट अछुतो रहन सकिरहेका छैनन् ।
कार्कीलाई प्रशासन विभागबाट अन्यत्र सरुवा गर्न तात्कालीन एमाले र अहिले नेकपा निकट नेता एवं कर्मचारीहरुले नै दवाव दिन पनि विद्या सुन्दरले कार्कीलाई नै अंकमाल गरेर हिंडिरहेको रहस्यको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
ज्ञानेन्द्रको चुरीफुरी राम्ररी नियालेका र नजिकबाट बुझेका मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ज्ञानेन्द्र कार्की महानगरमा बसुञ्जेल महानगरपालिका विकास नहुने, मेयर शाक्य बदनाम भईरहने र नेकपा पार्टी नै बद्नाम हुने उजुरी प्रधानमन्त्री निवाससम्म पुगेपछि मन्त्री लालबाबु पण्डितस“गको छलफलबाट नै कार्कीलाई मन्त्रालय काजमा तानिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सामान्यभन्दा सामान्य हैसियतमा काठमाडौं महानगरमा सुब्बाबाट छिरेका कार्की महानगरपालिकाको जागिर खाएर अहिले अर्बाैं रुपैयाँ कसरी कमाईरहेका छन् ? उनी विरुद्ध विगतमा दर्जनौ फाइला अख्तियारमा पुगेपनि फाइल चल्मलाउन नसकेको गुनासो महानगरका कर्मचारीहरुको रहेको छ । कार्कीको सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविन गर्नुपर्ने कुरा महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरु नाम नबताउने सर्तमा उल्लेख गर्दछन्। साँघुन्यूजबाट
कतारका इनाम उल हकले ४१ रन बनाएपछि नेपाल अप्रत्यासित हार व्यहोर्न पुगेको हो । नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले ३३ रन दिएर ३ विकेट लिएपनि अन्य बलरले उनलाई राम्रो साथ दिन सकेनन्।
कतारका दुईजना ब्याट्सम्यान रनआउट हुन पुगेका थिए भने एक विकेट करण केसीले लिएका थिए। नेपालको ओपनिंग जोडीले कीर्तिमानी ४९ रन जोडेपनि त्यसलाई मध्यक्रमले पूजिँकृत गर्न नसक्दा नेपालले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिन सकेन।
ओपनर कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पहिलो विकेटका लागि ४९ जोडेका थिए। खड्काले २८ रन बनाए भने मल्लले २३ रन बनाए ।
नेपालका लागि सर्वाधिक रन दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ३३ रन बनाए। अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो ब्याटिंग गर्न नसक्दा नेपाल कमजोर मानिएको कतारसँग पराजित हुन पुगेको हो। यो खेलमा पराजित भएसँगै उपाधि जितेर ग्लोवल छनोट खेल्ने नेपालको लक्ष्यमा झट्का लागेको छ।
अब नेपालले बाँकी ३ खेलमा नेट रनरेट सुधारसहित जित हात पार्नुपर्नेछ । ५ टिम सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने टिमले ग्लोवल छनोट खेल्न पाउनेछ । पाँच टिम मध्ये नेपाल र कुवेतमात्र हालसम्म जितबिहीन छन्। नेपालले बुधबार मलेसियासँग खेल्नेछ।
बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल अभियान अब एम्बुलेन्समा पनि
गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्दै देशविदेशमा विविध प्रचारात्म्क कार्यक्रम हिडेका गायक धिरज राइले एम्बुलेन्समा स्टिकर टाँस्ने अभियान सुरु गरेका छन् । मंगलबार उनले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ३ वटा एम्बुलेन्स र त्यहाँ चिकित्सकहरुको सवारीमा बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल लेखिएको स्टिकर टाँसेका छन् ।
भक्तपुरबाट सुरु भएको एम्बुलेन्समा स्टिकर टाँस्ने अभियान बुधबारदेखि देशव्यापी बनाउने गायक राईले बताए ।
गायक राईले केही दिन अघि चितवनको सौराहामा रहेका करिब १०० हात्तीमा पनि यस्तै प्रकारको बुद्धको तस्वीर अंकित स्टिकर टाँसेका थिए ।
उपत्यकाको ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजसँग मिलेर १ हजार ट्याक्सीमा र पोखराको फेवातालको डुंगामा पनि उनले बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश दिने स्टिकर टाँसिसकेका छन् ।